Yurub oo ka walaacsan sida uu Covid-19 ugu faafayo dalka UK (Sweden oo ku xigta)) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Yurub oo ka walaacsan sida uu Covid-19 ugu faafayo dalka UK (Sweden...
Yurub oo ka walaacsan sida uu Covid-19 ugu faafayo dalka UK (Sweden oo ku xigta))
(London) 17 Abriil 2020 – UK ayaa si joogto ah u diiwaan gelinaysa geerida ugu badan caabuq sidaha coronavirus, taasoo xitaa ‘cabsi gelinaysa’ dalalka kale ee Midowga Yurub, sida uu sheegay Wasiirka Caafimadka Austria.
Rudolf Anschober oo shir jaraa’id qabtay ayaa soo bandhigay tirakoob cabsi leh oo muujinaya inuu cudurku aad ugu kordhayo dalka UK 10-kii maalmood ee tegey.
Tirakoobka ayaa muujinaya in Britain ay boqolleeydu marayso 7.5% uu cudurku ka haleelay marka loo qaybiyo milyankii qofba.
Waxaan dab yar shidaynin Sweden oo ah 5.7%, kaddib France 3.7, Spain 3.2, Germany 3.0, Italy 2.5, Switzerland 2.2, iyo Austria oo 1.8%, sida tirakoobka ku cad.
Dalal badan oo uu cudurku horay u qurunsadey sida Italy iyo Spain oo taagnaa isha duufaanta ayaa iminka u muuqda kuwo soo kabanaya.
Yeelkeede, Dr Hans Kluge, Agaasimaha WHO ee Yurub ayaa sheegay in waloow uu khabar san yahay inuu cudurku hoos u dhacayo meelihii uu Yurub kasoo balleeyey aan misna la haynin wax badan oo lagu farxo marka la eego dalalka cusub ee uu dhulka la dhacayo sida UK, Belarusia iyo Russia, taasoo muujinaysa in aanu cudurka COVID-19 weli koow joogin.
Previous articleHaweenka ay raggoodu dilaan oo si aad ah u kordhay mudada HANDARAABKA (Tirakoob naxdin leh)
Next articleDEG DEG: Turkiga oo Somalia u diray dayuurad sida agab caafimaad oo muhim ah + Sawirro